FBI ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းဟောင်း Andrew McCabe သည်လိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲခံရမည်မဟုတ်ပါ - New York Times - TELES RELAY
FBI ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းဟောင်း Andrew McCabe အားနယူးယောက်တိုင်းမ်စ်လိမ်လည်မှုတွင်စွဲချက်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
၀ ါရှင်တန် - အက်ဖ်ဘီအိုင်ဒါရိုက်တာဟောင်းနှင့်သမ္မတ Trump ၏မကြာခဏပစ်မှတ်ဖြစ်သည့် Andrew G. McCabe အားသူနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအားလိမ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်တရားစွဲဆိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မီဒီယာများပေါက်ကြား
le အစိုးရရှေ့နေများ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ဝါရှင်တန်တွင်မစ္စတာမက်ကက်ဘ်အားနှစ်နှစ်နီးပါးအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားခဲ့သည့်ကိစ္စအားအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ရှေ့နေချုပ်ဝီလျံပီ။ ဘားရ်သည်တရားရေးဌာနသည်မစ္စတာ Trump နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းပြသရန်လိုကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ လူသိရှင်ကြားစိန်ခေါ် သမ္မတကဥပဒေစိုးမိုးရေးတာ ၀ န်ရှိသူများအားတွစ်တာပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးဝေဖန်သူများကသူ၏အလုပ်ကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
အစိုးရရှေ့နေများသည် McCabe ၏ရှေ့နေများအားသောကြာနေ့နံနက်တွင်ဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့ကြကြောင်းရှေ့နေများက Michael R. Bromwich နှင့် David Schertler တို့ကကြေငြာခဲ့သည်။
"လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်နီးပါးကရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်တဲ့အချိန်မှာအချက်အလက်တွေနဲ့ဥပဒေကရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်စွဲချက်တစုံတရာကိုမျှချမှတ်ခြင်းမရှိဘူး" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အင်ဒရူး McCabe နဲ့သူ့မိသားစုဟာမိုးတိမ်ဖုံးအုပ်မထားဘဲသူတို့ဘဝတွေကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်။
သမ္မတအားတရားရေးဌာနအားဆက်လက်ဝေဖန်မှုများသည်မစ္စတာမက်ကဘီ၏တရားစွဲဆိုမှုကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ သူ၏ထောက်ခံသူများသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုမစ္စတာ Trump ၏မဆုတ်မနစ်သောတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်ခံရပြီးမခြားမလပ်စူးစုပ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးရှိခဲ့သည်ဟုရှုမြင်ကြသည်။
စွဲချက်တင်မှုမရှိခြင်းသည်မစ္စတာမက်ကဘေးနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည့်အခြားအကြီးတန်းအက်ဖ်ဘီအိုင်အရာရှိများကတရားမဝင်ပစ်မှတ်ထားခံရသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသောမစ္စတာတွမ်ကိုဒေါသထွက်စေနိုင်သည်။ သူ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည်ရုရှားမှရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုကြံစည်ခြင်းရှိ၊
မစ္စတာ Trump နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှု သမ္မတ၏ရှည်လျားသောအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံဟောင်းရော်ဂျာဂျွန်စ်ဂျူနီယာအားပြင်းထန်သောထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းအတွက်တရားရေးဌာနနှင့်အစိုးရရှေ့နေများ။
မစ္စတာမက်ကဘက်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်တရားရေးဌာနစစ်ဆေးရေးမှူးမိုက်ကယ်အီးဟိုးဝစ်၏တွေ့ရှိချက်၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ က မစ္စတာ McCabe အပြစ်တင်ပါတယ် 2018 ခုနှစ်တွင်အပေါ်အင်တာဗျူးအတွက်အထင်မြင်မှားစေသောစုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့ သတင်းအချက်အလက်များကို Wall Street ဂျာနယ်သတင်းထောက်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည် ကလင်တန်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြောင်း
မစ္စတာ McCabe ၏ရှေ့နေများသည် Mr. Horowitz ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေကိုသူတို့မှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးလို့ယုံကြည်နိုင်အောင် မစ္စတာမက်ကဘက်၏ရှေ့နေများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သြဂုတ်လတွင်ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Jeffrey A. Rosen နှင့်ကိုလံဘီယာခရိုင်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် Jessie K. Liu တို့နှင့်အတူရှေ့နေများကအမှုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလတွင်၊ ဂျူရီလူကြီးများကိုလအနည်းငယ်မျှတွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်တရားရုံးမှထွက်ခွာသွားသည့်စွဲချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းမရှိပဲထွက်ခွာခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်တရားရေးဌာနမှအရာရှိများကမစ္စတာမက်ကဘေးအတွက်အကြံပေးပြောကြားခဲ့သည် သူတို့ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သူ့ကိုစွပ်စွဲဖို့မနောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခ။
အမှု၌အားနည်းချက်လက္ခဏာများထင်ရှားခဲ့သည်။ အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံအစိုးရရှေ့နေတစ် ဦး သည်မကြာသေးမီကထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ အခြားတစ် ဦး သည်ပုဂ္ဂလိကဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ထွက်ခွာခဲ့ပြီးအမှုကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိခဲ့သည်။
အဓိကမျက်မြင်သက်သေတစ် ဦး ကပြောကြားရာတွင်မစ္စတာမက္ကဘီတွင် FBI လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်မီဒီယာများနှင့်စကားပြောဆိုခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်လိမ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဟုဆိုသည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ သက်သေထွက်ဆိုချက် သူယိုစိမ့်သွားပုံကိုသူချက်ချင်းမမှတ်မိပါ။ သူတို့နှစ် ဦး သည်မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်မဆိုအရေးပါ၏
ထို့အပြင် FBI နှင့်လိမ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်းတွင်ကျူးလွန်မှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည် ဥပမာအားဖြင့်မစ္စတာ Horowitz ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆုံးဖြတ်သည် တရားရေးဌာနအကြီးတန်းအရာရှိတ ဦး ကသူ့အလုပ်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအားမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များပေးခြင်းဖြင့်အမှားပြုခြင်းကိုကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်းအစိုးရရှေ့နေများသည်စွဲချက်တင်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
မစ္စတာမက်ကဘီ၏ရှေ့နေကမစ္စတာရိုဆန်အားစစ်ဆေးရေးအထွေထွေမှစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏လိမ်ညာမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်အခြားအစိုးရ ၀ န်ထမ်းဟောင်းများအားတရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရသေးကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်
မစ္စတာမက်ကabeသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောရာနှင့်ချီရရှိသောဗာဂျီးနီးယားဆီးနိတ်အတွက် ၂၀၁၅ မအောင်မြင်သောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းမစ္စတာမက်ကက်ဘီ၏ဇနီးဂျီလ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သောမစ္စတာ Trump အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကလင်တန်မဟာမိတ် ဦး ဆောင်သောနိုင်ငံရေးကော်မတီမှလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။
Trump သည်သူ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို McCabe ကဟီလာရီကလင်တန်အားကာကွယ်ရန်၎င်းအားဖျက်သိမ်းလိုကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သူမပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ရေးဆာဗာကိုအသုံးပြုသည့်အခါ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သမ္မတက James B. Comey အား FBI မှညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့စဉ်ကမစ္စတာ McCabe အားကလင်တန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုခြင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတထံမှမစ္စတာ Comey ထံသို့ New York Times သို့ဖတ်ကြားစာမူကြမ်း။
“ ဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်ကလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို FBI အမတ်အင်ဒရူးမက်ကာဘီကကလင်တန်ရဲ့အီးမေးလ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကြီးကြပ်ခွင့်ပြုတာကမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့ချိုးဖောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အနီးကပ်ကလင်တန်အငှားခြင်းဖြင့်သူမ၏မှညွှန်ကြားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှူဒါန်းမှုအတွက် $ 700 "Trump ရေးသားခဲ့သည်။ "ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ McCabe ကိုခွင့်မပြုသင့်ဘူး။ "
မစ္စတာ Trump ရဲ့လက်ထောက် ကြားဝင်ခဲ့သည် မစ္စတာ Comey အားသူ၏ရပ်စဲမှုကိုရှင်းပြသည့်ပိုမိုနူးညံ့သည့်စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။
သမ္မတမူဘာရက်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတ၏အမြင်သဘောထားအနည်းငယ်ကသာသက်သေထူသည်။ မစ္စစ်မက်ကဘေးသည်သူမ၏သားဖောက်ထွင်းမှုပြီးဆုံးသည်အထိသူသည်ရုံး၏ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ကလင်တန်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကြီးကြပ်ခြင်းမပြုပါ Wall Street ဂျာနယ်ဆောင်းပါး သမ္မတမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပြီးတွင်မစ္စစ်ကလင်တန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအထောက်အကူပြုခြင်းထက် ပို၍ ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
စစ်ဆေးရေးမှူး၏အစီရင်ခံစာအပြီးတွင်လများအတွင်းသမ္မတကမစ္စတာမက်ကဘေးအားပယ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ "FBI ။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအင်ဒရူးမက္ကဘီကအချိန်ဖြုန်းနေပြီး၊ Tweet ဒီဇင်ဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင် "ရက်ပေါင်း 90 မတိုင်မီ? !!! "
ရှေ့နေချုပ်ဟောင်း Jeff Sessions မစ္စတာ McCabe ပစ်ခတ်ကြသည် သူသည်ဤအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမီနာရီအနည်းငယ်တွင်၊ ကွန်ဂရက်မှရာဇ ၀ တ်မှုလွှဲပြောင်းမှုရရှိပြီးနောက်မစ္စတာမက်ကဘေးသည်မစ္စတာဆက်ကာအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရုရှားသံတမန်နှင့်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပြုအမတ်များကိုလိမ်ညာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ။ ဒီကိစ္စကိုပိတ်လိုက်တယ်
McCabe သည် FBI တွင် ၂၁ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ရုရှားရာဇ ၀ တ်မှုရာဇ ၀ တ်မှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နယူးယောက်မြို့၌စတင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်သမားများသည်အမြွှာမျှော်စင်များထိမှန်သောအခါမစ္စတာမက်ကဘီသည် SWAT ရုံးအဖွဲ့ ၀ င်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုကြီးကြပ်ပြီးရုံး၏အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနနှင့် ၀ ါရှင်တန်ရှိနယ်မြေရုံးကို ဦး ဆောင်သည်။ ကလင်တန်၏အီးမေးလ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်သူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
မစ္စတာ Comey ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်မစ္စတာမက်ကဘီသည်ရုံး၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ပြင်းထန်သောမငြိမ်မသက်မှုများကြားကာလအတွင်းအက်ဖ်ဘီအိုင်ကိုသရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ မစ္စတာ Comey ကိုရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်တရားမျှတမှုအားဟန့်တားခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စတင်ခဲ့ပြီး Mr. Trump သည်ရုရှား ဦး ဆောင်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
အထူးရှေ့နေရောဘတ်အက်စ်။ မူလာ ၃ သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပြန်လည်စတင်သည် သူကမစ္စတာ Trump သို့မဟုတ်သူ၏အပေါင်းအသင်းတ ဦး တည်းရုရှားနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုအားသွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်း။ Mueller လည်းသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်များ၏စွဲချက်ဆန့်ကျင်တရားရေးဌာနရဲ့မူဝါဒကိုးကားပြီးတရားမျှတမှုပိတ်ဆို့ခြင်းရှိမရှိပြောရန်ငြင်းဆန်ပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားများတင်ပြ သမ္မတ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတားဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှု.
သမ္မတနှင့်မစ္စတာ McCabe အကြားမကျေနပ်မှုမှာမစ္စတာ Trump အားသူ၏မိသားစုအားအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ရုရှားသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲသည့်သူ၏စာအုပ် The Threat စာအုပ်ထုတ်ဝေမှသာတိုးပွားလာသည်။ ။
McCabe ကသူသည်ကျွန်ုပ်အားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် FBI သည်ရုရှားတွင်ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်သောကြောင့်အထူးကောင်စီခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ Mueller ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမစ္စတာ Trump အတွက် "အိမ်ဖြူတော်၌သူ၏တည်ရှိမှု၏တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများကို - ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖြစ်စေသောမေးခွန်းများကို" ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
UEFA ကချန်ပီယံလိဂ်ရာသီ ၂ ပွဲတွင်မန်စီးတီးကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်
Canada - ရင်ခုန်စရာပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်